Maitiro eKudyisa Yako WordPress Blog Zvinyorwa NeTag Mune Yako ActiveCampaign Template
Muvhuro, April 11, 2022 Muvhuro, April 11, 2022 Douglas Karr
Tiri kushanda mukugadzirisa dzimwe nzendo dzeemail kune mutengi anosimudzira akawanda marudzi ezvigadzirwa pane yavo WordPress saiti. Imwe neimwe yeActiveCampaign email matemplate atiri kuvaka akagadziridzwa zvakanyanya kune chigadzirwa chaari kusimudzira nekupa zvirimo pachiri. Panzvimbo pekunyorazve zvakawanda zvemukati zvakatogadzirwa zvakanaka uye zvakarongwa paWordPress saiti, isu takabatanidza bhurogi ravo mumatemplate avo eemail. Nekudaro, yavo bhurogu inombundira zvigadzirwa zvakawanda saka taifanira
Chinja Pro: Tungamira Chizvarwa & Email Sarudza-MuPopup Plugin yeiyo WordPress
Muvhuro, October 19, 2020 Chitatu, Kukadzi 9, 2022 Douglas Karr
Tichifunga nezve kutonga kweWordPress seyakagadziriswa manejimendi sisitimu, zvinoshamisika kushomeka kwekutarisirwa kunonyatso kubhadharwa mupuratifomu yepamoyo pane chaidzo shanduko. Anenge mabhuku ese - ingave iri bhizinesi kana rako bhurogu - rinotarisa kushandura vashanyi kuva vanyoreri kana tarisiro. Nekudaro, hapana chaicho zvinhu mukati meplatform chikuva chekutora chiitiko ichi. Chinja Pro ndeye yakazara WordPress plugin iyo inopa yekudhonza & kudonhedza mupepeti, nhare inopindura
Privy: Nyore Kushandisa, Simba Zvimiro zveOn-Saiti Kuwana Kwevatengi
Chipiri, June 25, 2019 Chitatu, December 23, 2020 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vedu ari paScarespace, yemukati manejimendi sisitimu iyo inopa zvese zvekutanga - kusanganisira ecommerce. Kune vanozvishandira-vatengi, ipuratifomu yakanaka ine dzakawanda sarudzo. Isu tinowanzo kurudzira yakapihwa WordPress nekuda kwekusagona kwayo kugona uye kushanduka ... asi kune vamwe squarespace isarudzo yakasimba. Ipo squarespace ichishaya iyo API uye mamirioni ezvibatanidzwa zvakagadzirwa izvo zvakagadzirira kuenda, unogona achiri kuwana mamwe maturusi anoshamisa ekuvandudza yako saiti. Isu